Yakachipa Ruviri Shaft Fertilizer Chisanganiso Machine Vanopa uye Fekitori | YiZheng
Iyo Kaviri Shaft Fertilizer Chisanganiso Machine chizvarwa chitsva chekuvhenganisa michina yakagadzirwa nekambani yedu. Ichi chigadzirwa chigadziro chitsva chekuvhenganisa icho chinogona kuona kuenderera kushanda uye kuramba uchidyisa uye kuburitsa. Izvo zvakajairika mukutora maitiro eakawanda eupfu fetiraiza yekugadzira mitsara uye granular manyowa ekugadzira mitsara.
Chii chinonzi Double Shaft Fertilizer Chisanganiso Machine?
Kaviri Shaft Fertilizer Chisanganiso Machine michina inosanganisa inoshanda, iyo yakareba tangi hombe, zvirinani kusanganisa maitiro. Huru mbishi zvinhu uye zvimwe zvekubatsira zvinhu zvinodyiswa mumidziyo panguva imwechete uye zvakasanganiswa zvakafanana, zvobva zvatakurwa nebhandi rekutakura kuenda kune iyo granulation maitiro eiyo granulation. Iyo Kaviri Shaft Fertilizer Chisanganiso Machine adopts inoverengeka rotor mamiriro kupwanya hombe zvinhu panguva unomutsa, kuti vabudirire chinangwa mamwe yunifomu vaiitawo. Iyo muchina ine compact dhizaini, yakanaka yekuisa chisimbiso, yakanaka chitarisiko uye zviri nyore mashandiro uye kugadzirisa.
Chii chinonzi Double Shaft Fertilizer Mixer inoshandiswa?
Kune maviri machena machena machena anotenderera achienderana mumuviri mukuru we Kaviri Shaft Fertilizer Chisanganiso Machine, uye iyo helical axis yakagadzirirwa chipinga-chinotenderera pulp blade. Iyo pulp blade inoshandura izvo zvinhu pamwe chete neaxial uye radial kutenderera kune imwe Angle, kuitira kuti iyo zvinhu inogona kukurumidza uye zvakaenzana yakavhenganiswa. Iyo yekudyira inlet yemuchina inopihwa isina guruva bhaffle, iyo inogona kunyatso kudzivirira chizvarwa chemvura mhute. Iyo yekudyidzana nzvimbo pakati pepurp blade iri muhukama hwakazara nezvinhu kuti kuita kwekusanganisa kuwedzere kunyangwe. IyoKaviri Shaft Fertilizer Chisanganiso Machine inogona kunyorovesa iyo powdery zvinhu kana ichikurudzira. Iyo yekuyera yezvinhu zvakanyoroveswa haisi yakaoma dota kana mvura inoyerera. Iko kunopisa humidified kunoisa hwaro hweyakazotevera yekufambisa uye granulation maitiro.
Kushanda kweDhaidhi Shaft Fertilizer Chisanganiso Machine
Iyo Kaviri Shaft Fertilizer Chisanganiso Machine inokodzera kusanganisa anopfuura maviri marudzi efetiraiza, zvinowedzera zvekuwedzera, chikafu chemubatanidzwa, chikafu chakakosheswa, chinowedzera chekuwedzera chikafu, nezvimwe.
Zvakanakira Double Shaft Fertilizer Chisanganiso Machine
(1) Kunyatsogadzikana kuita.
(2) Huru inomutsa chinzvimbo.
(3) Kuramba kugadzirwa.
(4) Ruzha rwezasi.
(5) Nyore yekuisa uye kugadzirisa.
Kaviri Shaft Fertilizer Chisanganiso Machine Vhidhiyo Ratidza
Kaviri Shaft Fertilizer Chisanganiso Machine Model Sarudzo
Pashure: Uswa & Wood Crusher
Zvadaro: Horizontal Fertilizer Chisanganiso
Nhanganyaya Chii chinonzi Hot-air Stove? Hot-air Stove inoshandisa huni kupisa chaiko, inogadzira kupisa kunopisa kuburikidza nekuchenesa kwakanyanya kurapwa, uye inobata zvakananga izvo zvinhu zvekudziya uye kuomesa kana kubheka. Chave chinotsiva chigadzirwa chemagetsi kupisa sosi uye yechinyakare hwemhepo simba kupisa sosi mumaindasitiri mazhinji. ...
Nhanganyaya Chii chinonzi Rotary Drum Sieving Machine? Rotary Drum Sieving Machine inowanzoshandiswa kupatsanura zvigadzirwa zvakapera (hupfu kana granules) uye zvinhu zvekudzoka, uye zvakare inogona kuona kuiswa kweyezvigadzirwa, kuitira kuti zvigadzirwa zvakapedzwa (hupfu kana granule) zvigone kuenzaniswa. Icho chitsva rudzi rwega ...
Nhanganyaya Chii chinonzi Roll Extrusion Compound Fertilizer Granulator? Iyo Roll Extrusion Compound Fertilizer Granulator muchina isingaomeswi granulation muchina uye iine yepamberi yekuomesa-yemahara granulation michina. Ine zvakwakanakira zvemberi tekinoroji, inonzwisisika dhizaini, compact chimiro, utsva uye zvinoshandiswa, yakaderera simba co ...
Nhanganyaya Chii chinonzi Horizontal Fertilizer Mixer Machine? Horizontal Fertilizer Mixer Machine ine shaft yepakati ine blade dzakakomberedzwa nenzira dzakasiyana dzinoita kunge ribhoni resimbi rakamoneredzwa pamubato, uye inokwanisa kufamba munzira dzakasiyana panguva imwe chete, ichiona kuti zvese zvinoshandiswa zvinosanganiswa mukati. Horizonta yedu. ..
Nhanganyaya Chii chinonzi Vertical Chain Fertilizer Crusher Machine? Iyo Vertical Chain Fertilizer Crusher ndechimwe chezvinhu zvinonyanya kushandiswa kupwanya michina mukomboni fetiraiza indasitiri. Iine simba rakasimba rekugadzirisa zvinhu zvine huwandu hwemvura uye inogona kudyisa zvakanaka isina kuvhara. Izvo zvinhu zvinopinda kubva ku ...